Waa la daabacay25.04.2022
Haddii aad Finland deganayd 4-7 sano luqada deegaankana aad baratay, waxaad codsan kartaa jinsiyadda Finland. Waa maxay dhammaan waxyaabaha ay tahay in aad ku xisaabtanto, marka aad ku talajirto in aad jinsiyadda codsato?
Codis ku helitaanka dhalashada Finland waxay u baahan tahay in
aad shaqsiyadaada si la aamini karo u cadeyn karto
aad jirto ugu yaraan 18 sano ama xaas tahay
aad Finland deganeyd waqti dheer , xaaladda ayuu ku xiran yahay waqti deganaanshaha ee la iska doonayo. Sida caadiga ah waa ugu yaraan 4–7 sano.
aadan dembiga gelin
aadan bixin diidin tusaale ahaan cashuurta, ganaaxyada, lacagta masruufka ama lacagta
aad awoodo inaad cadeyso sida aad Finland noloshaada uga soo saaran karto
aad luqada Finnishka ama Iswidishka ama luqada dhagoolaha ee Finnishka ama Iswidishka aad si lagu qanci karo u taqaano. Ka aqri faahfaahin dheeraad caddeynta luqadeed boga InfoFinland Shahaadada rasmiga ah ee aqoonta luuqada . Luuqadaha finnishka iyo iswiidhishka xogta barashadooda waxaad ka heleysaaboga InfoFinland Luuqada finnishka iyo iswiidhishka .
Codsiga dhalashada waxaad ka sameyn kartaa adeegga internetka ee Enter Finland. Codsiga ka buuxi adeegga kuna dar lifaaqyada. Codsiga awgiis waxaad ugu yaraan u baahan tahay dukumiintiyada soo socda:
Waraaqaha aqoonsiga oo aan dhacsaneyn
Cadeyn xagga aqoonta luuqadda Finnishka ah
Cadeyn xagga dakhliga ah
Sidoo kale bixi lacagta goaan ka gaarista codsiga.
Markii aad codsiga adeegga ka buuxiso, waxaad haystaa mudo sadex bilood ah oo aad ku tagto barta adeegga si waraaqahaaga aqoonsiga loo xaqiijiyo. Waqti ka qabso barta adeegga ee Xaafiiska dal u soo guurista adigoo isticmaalaya adeegga internerka Xaafiiska dal u soo guurista. Markii aad iska soo xaqiijineyso xaafiiska, horay u sii qaado waraaqahaaga aqoonsiga iyo nuqulka lifaaqyada codsiga oo asal ah.
Haddii aad sidoo kale dhalashada u dalbeysid carruurtaada, sidoo kale waa inay kula socdaan si aqoonsigooda loo xaqiijiyo.
Markii aad buuxiso codsiga, xasuusnow inaad la socoto adeegga koontadaada Enter Finland. Haddii Xaafiiska dal u soo guuristu uu codsigaaga xal ka gaaristiisa awgeed kaaga baahdo faah faahin dheeraad ah, akhbaarta waxaa laguugu soo dirayaa akoonkaaga adeegga Enter Finland. Codsiga waa la diidi karaa haddii aadan faah faahinta dheeraadka ah ee lagaaga baahan yahay ku soo gubin waqtigii laguu qabtay. Markii go’aanka la gaaro, waxaad heleysaa ogeysiiska go’aanka.
Haddii aadan awoodin ama aadan aqoon u lahayn inaad codsiga dhalashada internetka ka buuxiso, waxaad sidoo kale foomka codsiga ku buuxin kartaa waraaq ahaan. Foomka ka soo daabaco bogga internetka ee Xaafiiska dal u soo guurista, kadibna horay u soo buuxi. Codsiga oo la buuxiyey iyo lifaaqyadisaba si shakhsiyan ah u gey barta adeegga ee Xaafiiska dal u soo guurista.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codsashada dhalashada iyo arrimaha kale ee la xiriira dhalashada waxaad ka heleysaa bogga Xafiiska dal u soo guurida.
Dhalashada Finland waa wax ka duwan sharciga deganaanshada. Haddii aad hadda qorsheyneysin inaad Finland u guurto, wixii macluumaad dheeri ah ka akhri bogga InfoFinland U soo guurista Finland .
Codsashada dhalashada FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Jinsiyada caruurtaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Codsiga dhalashadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Qaab elektrikal ah arrimo mu sameysasho Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Barta adeegga ee hay'adda dadka waddanka u soo guureyLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Waqti qabsashada xagga internetka ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa